March 14, 2021 - Channel Lover
ဒီနေ့ပစ်ခတ်မှုမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကိုဝေဖြိုးအောင်(ခ) ကိုဂျက် ဦးထုပ်လေးမှာ နာမည်ရယ်.. သွေးအမျိူးအစားရယ်. အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ်ရယ် ရေးထားခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦး ! RIP ပါ… လှိုင်သာယာမီးခွက်ဈေး အဖြူရောင်သုခအလင်း အသင်းသား ကိုဝေဖြိုးအောင်(ခ) ကိုဂျက် အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တပ် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လည်ပင်းထိဒဏ်ရာဖြင့်ကျဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ ၁၄ရက်။ #MyanmarLabourNews မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးအေးချမ်းနိုင်ပါစေ အမြန်ဆုံး ဒီမိုကရေစီရနိုင်ပါစေ unicode ဒီနပေ့ဈခတျမှုမှာ ကဆြုံးခဲ့တဲ့ ကိုဝဖွေိုးအောငျ(ခ) ကိုဂကျြ ဦးထုပျလေးမှာ နာမညျရယျ.. သှေးအမြိူးအစားရယျ. အရေးပျေါဆကျသှယျဖို့ ဖုနျးနံပါတျရယျ ရေးထားခဲ့တဲ့ သူရဲကောငျးတဈဦး ! RIP ပါ… လှိုငျသာယာမီးခှကျစြေး အဖွူရောငျသုခအလငျး အသငျးသား ကိုဝဖွေိုးအောငျ(ခ) ကိုဂကျြ အကွမျးဖကျလကျနကျကိုငျတပျ ပဈခတျမှုကွောငျ့ လညျပငျးထိဒဏျရာဖွငျ့ကဆြုံးသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မတျလ ၁၄ရကျ။ #MyanmarLabourNews … Read more